Isisindo somntwana sisanda ku-3.2 kg, kwaye ubude sele bulinganiswe kungekhona kwisithsaba ukuya kwi-coccyx, kodwa ngokukhula ngokupheleleyo kwaye malunga ne-48 cm. Ukongeza, ukucoca kwamathambo angaphantsi kwamanani, ngenxa yokuba kungekudala kuya kubakho ukukhusela kwimpembelelo yangaphandle. iiveki zokukhulelwa - izitho kunye neenkqubo zilungiselelwe ngokupheleleyo ukusebenza ngaphandle kwepentecenta.
Usana ulindele intlanganiso kunye nehlabathi langaphandle
I-vmed villi emathunjini, okokuthi, i-peristalsis, ekuvumela ukuba uhambe emathunjini kwimveliso ye-excretion. Kuthe malunga nokudibanisa inkqubo yokugaya isisu, kuquka ne-pancreas. Kodwa iibhaktheriya, apho i-process of digestion yenzeka ngayo, ayisabonakali kwaye iya kubonakala kuphela emva kokuzalwa nokutya kokuqala.
Isixhobo esilisayo - yinto eyenziwa ngokukodwa kwiveki yama-39. Uthungelwano lwemithambo yegazi lubonakala kumlenze womlonyeni womlomo, ukuze emva kokuzalwa komntwana, iinkqubo zokuxhamla zenzeke apha. Nangona umntwana engazange aqalise ukusondla, izilonda ze-salivary kunye nezihlunu zokuhlafuna azikhululwanga ngokukodwa, kodwa ekuqaleni kwenkqubo yonke into iyaqhubeka.
Kwaye ngokubaluleke kakhulu - kwiveki ye-39 isityalo sinokulungele ukuzalwa.
Ikhalenda yokukhulelwa kweeveki ezingama-39: ibhinqa elinde ummangaliso
Ukongeza kwisisindo esingekho ndawo, siya kumisa kwi-11 .5 - 16 kg, eqokelelwe kwiiveki ezedlulileyo. I-uterus 36 ukuya kwi-40 cm iphakame ngaphezu kwe-pubic symphysis (16-20 cm ukusuka kwintonga).
Ikhalenda yokukhulelwa: iimpawu zokuzalwa
Kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kokuzalwa, kunokukho iimpawu:
Ukusuka kwindlela yokuzala, i-plug mucous iphuma, kwaye ukukhutshwa ngegazi kungabonakala;
isisindo sinciphisa kancane;
mhlawumbi ukwandisa ukutya;
isitulo siphelela kanzima;
"I-Instinct of nesting" - ukuziphatha okubonakaliswa ngophando kwindawo ephumlileyo, ikhoneni elifihliweyo.
Imibuzo yabasetyhini kwiiveki zokugqibela zokukhulelwa
Le mibuzo ihambelana nexesha lokuhamba emva: ukunyuka kwinqanaba eliza kuhlahloka, indlela ubelethwano ngayo emva kokubeleka, njl. Ngokubanzi, unokuphendula oku: uchithe iinyanga ezilishumi elinesibini emva kokuba kungelula ukuba kulungelelanise, kokubili umzimba kunye nengqondo, nokuba ngaba unenhlanhla ngokwaneleyo yokuzala ngokukhawuleza kwaye kulula.
Ubunzima bakho buya kuncipha nakweyiphi na imeko, ngenxa yokuba ngaphakathi kwakho akukho iplascenta, iziqhamo kunye namanzi agciniweyo.
Ulwabiwo phantsi kwegama lochia luya kuhlala lide, mhlawumbi iiveki ezimbalwa. Ungazidibanisi kuphela ngokuya esikhathini, kuba okokuqala zibukeka njengezo, kodwa ke zilula kwaye zigcine ziyeka.
Iintsuku zokuqala zexesha lokugqibela, mhlawumbi, ziya kuhamba kunye nokhathazeka nokungazinzi. Ukugqithisa kwakho kuyaqondakala, kuba kungekhona nje umntwana, nawe ufumane ubunzima obukhulu. Nangona kunjalo, ungakulibali ukuba akulula kubantu abakuzungezile ukuba babone xa ungekho kakuhle. Ngethamsanqa, olu hlobo lweengxaki aluhlali ixesha elide kuneeveki ezimbalwa.
I-uterus, leyo ngaphambi kokuzalwa ikhule ubukhulu be-watermelon, iya kuncipha, kodwa ithoni kuyo iya kubuya kuphela emva kwexesha, emva "kokuzalwa" okugqibela. Le nkqubo ihambelana nokuphuma kwegazi ukuyiyeka, i-oxytocin echanekileyo.
Iiveki ezingama-39 zesisu: izifundo
Ngokuqinisekileyo uqaphele ukuba amabele akho akhula. Emva kokubeleka, kunokuba ngakumbi nangobisi, ngoko i-bras yakho endala ayifumananga. Ngoko ke, kuyafaneleka ukunyamekela oku, kunye nokulungiselela amalungiselelo ambalwa xa kwenzeka ubisi bubaleka.
Ukukhathala okukhulu xa ukhulelwa
Uvavanyo lwezonyango kunye nemigomo
Ukupheka okumnandi, zokupheka izitya zokutya kunye nezempilo
Iziyobisi kunye nezilungiso zokulala
Indlela yokulahlekelwa isisindo ngama-kilogram e-15: iimfihlo ezintathu zika-Irina Dubtsova
Imigaqo yokuziphatha kwiqela elitsha
Ukukhusela amakhowe ekhaya